के चाहन्छन् विद्यार्थी ? | गृहपृष्ठ
Home युवा विचार के चाहन्छन् विद्यार्थी ?
on: ५ असार २०७०, बुधबार ००:०० युवा विचार 10 views
मानसी कट्टेल (८६ प्रतिशत)
सिद्धार्थ वनस्थली इन्ष्टिच्युट
भविष्यमा के बन्ने भन्ने त निश्चित छैन । ‘बायोमेडिसिन’ मेरो रुचिको क्षेत्र हो । प्लस टूमा विज्ञान विषय लिएर पढ्ने सोच बनाएकी छु । विज्ञान अध्ययनपछि मेडिकल, इञ्जिनीयरिङ, व्यवस्थापनजस्ता जुन क्षेत्रमा पनि जान सकिन्छ । अहिले परिवारको सुझावअनुसार प्रवेश परीक्षाका लागि तीनओटा कलेजमा फारम भरेकी छु । तीमध्ये अध्ययनको उपयुक्त वातावरण भएको कलेजमा पढ्छु । मेरो पढाइलाई निरन्तरता दिन कलेज, विद्यार्थी र सरहरूको सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ । नियमित निर्देशन दिने र विद्यार्थीको भित्री क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने विद्यालय राम्रो हुन्छ । म त्यस्तै विद्यालयको खोजीमा छु ।
श्रुति सिंह महर्जन (८९ प्रतिशत)
विद्यापुञ्ज मावि, लामाटार, ललितपुर
विज्ञान पढ्ने सोचका साथ सेण्टमेरिज उमाविको प्रवेश परीक्षा दिएकी छु । सम्भवतः त्यहीँ नै अध्ययन गर्छु होला । भविष्यमा डाक्टर बन्ने लक्ष्य छ । त्यसैले, प्लस टूमा विज्ञान विषय रोजेकी हुँ । मेरो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन कलेज र परिवारको सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा ध्यान दिने कलेज आवश्यक छ । विद्यार्थीलाई पढाइका साथसाथै अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि सहभागी गराउनुपर्छ । कलेजसँग मेरो अपेक्षा अध्ययनको उपयुक्त वातावरण, मिलनसार साथी र अध्ययनका लागि आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध हुनुपर्‍यो ।
प्रकृति राई (८८.८७ प्रतिशत)
लुम्बिनी एकेडेमी उच्चमावि
एसएलसीको परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि अहिले मलाई कलेज छनोट गर्न गाह्रो भएको छ । मलाई लाग्छ, अन्य साथीहरूलाई पनि यस्तै समस्या परे होला । मैले प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा साइन्स विषय अध्ययन गर्ने सोच बनाएकी छु । यो तह उत्तीर्ण गरेपछि भविष्यमा विभिन्न क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । त्यसैले, साइन्स विषय पढ्ने विचार बनाएकी हुँ । पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार एवम् शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएको कलेज मेरो रोजाइ हो । साथै, त्यहाँ पढाउने शिक्षक दक्ष एवम् विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने किसिमका हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै कलेजको खोजीमा छु म ।
साजन पुरी (७५.५० प्रतिशत)
क्यानभास स्कूल, नयाँ बानेश्वर
म होटल म्यानेजमेण्ट विषय लिएर पढ्ने विचारमा छु । यसका लागि कलेजहरू हेरिराखेको छु । अहिलेसम्म क्लासिक कलेज, तिलगङ्गा मन परेको छ । यो कलेजमा होटल म्यानेजमेण्ट पढ्न राम्रो वातावरण रहेको पाएँ । यहाँबाट मेरो साथीको दाइले ७४ प्रतिशत अङ्क ल्याएर प्लस टू पास गरेकाले पनि यो कलेजप्रति बढी विश्वास लागेको हो । विद्यार्थीलाई बढीभन्दा बढी प्रयोगात्मक कुरामा जोड दिइन्छ भन्ने सुनेको छु । विद्यालयमा म बास्केटबल टोलीको सदस्य थिएँ । हामीलाई खेलकुदमा पर्याप्त अवसर चाहिन्छ । विद्यालयको एउटै समूहका अरू साथी ‘साइन्स’ पढौं भन्दै थिए । तर, मलाई कूक बन्ने रहर छ । त्यसैले, यो विषय रोजेको हुँ । यसले गर्दा हाम्रो समूह पनि छुट्टियो ।
कृति श्रेष्ठ (७९.७५ प्रतिशत)
दुई नम्बर कम आएका कारण विशिष्ट श्रेणी आएन । यो परीक्षाले भविष्यमा अझ राम्ररी पढ्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा मिलेको छ । तर पनि म खुशी नै छु । यसको श्रेय मैले अध्ययन गरेको विद्यालय तथा अभिभावकलाई दिन चाहन्छु । मेरो लक्ष्य भविष्यमा इन्भायरोन्मेण्ट आर्किटेक्चर बन्ने छ । जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण वातावरणमा परेको प्रतिकूल असरलाई न्यून गर्न वातावरणमैत्री संरचनाहरू निर्माण गर्ने मेरो सोच छ । विद्यालय जीवनमा वातावरण संरक्षणबारे धेरै पढाइ हुन्थ्यो । त्यसबाटै पनि मलाई यससम्बन्धी केही गरूँ भन्ने प्रेरणा मिलेको हो ।
फलामे ढोका पार गरेपछि चुनौती आइलागेको छ
डली अग्रवाल (७६ प्रतिशत)
डीएभी सुशील केडिया विश्वभारती स्कूल
नेपालमा यो परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेले फलामे ढोका पार गरेको मानिन्छ । तर, मैले परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि फलामे ढोका पार गर्नुलाई चुनौती ठानेकी छु । अब कुन कलेज पढ्दा मेरो सपना पूरा हुन सक्ला ? सानैदेखि मेरो लक्ष्य भविष्यमा डाक्टर बनेर गरीब र दुःखीको सेवा गर्ने छ ।